Saint Anthony gwọọ nwa agbọghọ dị ọnwa atọ site n'ọrịa ọjọọ
di Paolo Tescio - Machị 30, 2021
Verona: Sant 'Antonio gwọọ nwatakịrị nwanyị: Fada Enzo Poiana kọọrọ ya akụkọ ya n'oge ụka a na-eme obere Kairyn baptizim. Otu ezigbo nwa agbọghọ dị ọnwa atọ na ọkara, nke sitere na mpaghara Veronese.
Ọrụ ebube n'ihi na, tupu a mụọ ya, ọnọdụ nke Ahụike Kairyn ha nyere ndị nne na nna na-eto eto ihe na-echegbu onwe ha. Ugbua na nleta ndị ọkachamara nke mbụ, nnukwu ntụpọ dị n'ihu nwa ebu n'afọ pụtara nke gbanwere obere ihu ya. Dọkịta ahụ kwuru na lipoma ma ọ bụ ọbụna njọ liposarcoma nke nwere ike imebi ndụ nke nwa amụrụ ọhụrụ. A nleta nke abuo Ọkachamara gosipụtara naanị mbibi nke mbibi, n'ezie ọ bịara ka njọ n'ihi na agbakwunyere ọrịa ụbụrụ buru ibu. Ma mgbe na Verona, e nwere ọtụtụ ndị ọkachamara na-eleta anya n'etiti nchegbu, na Padua enwere onye na-ekpegara Saint Anthony ekpere: nne nne nwanyị nke obere, na-etinye aka na Saint.
Ezinụlọ ahụ kpebiri ịgbanwe na-enye ìhè nke Bologna, onye ọ rịọrọ maka oge, edebere maka njedebe nke August. Oge gafere ime ihe ọ bụla maka Kairyn. Ma mgbe ihe niile yiri ka ha efuola, ihe mbụ anyị na-akpọzi ọrụ ebube dị ugbu a. Oku ekwentị si Bologna rutere n'ụlọ nne na nna nwa ahụ: a na-atụ anya nleta ahụ June 13, Daybọchị St. Anthony, na 18 nke mgbede, oge usoro ọdịnala. Nne nne na-eme ka ekpere na nleta dị nsọ, nne ahụ na-emekwa otu ahụ ma na-enwetakwa ụfọdụ ngọzi, rue ụbọchị nyocha ahụike na ọrụ ebube abịarute Ihe na-enye ìhè na-eleta Kairyn dị ka a ga-asị na ọ bụ site na anwansi ka ihe niile gwụla. Unyi bu e ọrịa ahụ funyụrụ anya.
Ekpere nye St. Anthony maka mkpa ọ bụla
- Verona, Sant 'Antonio gwọọ nwatakiri: ekpere
O tozughị oke maka mmehie ndị emere ka ọ pụta n’ihu Chineke
Abịara m n’ụkwụ gị, Saint Anthony kachasị hụ gị n’anya,
ịrịọ arịrịọ gị na mkpa nke m na-atụgharị.
Mara ihe banyere ike gị,
naputam na nmebi nile, karisia na nmehie,
e rịọ maka amara nke ...............
Ezigbo Saint, a nọ m n’ọtụtụ nsogbu
na Chineke nyefere gị lekọta, yana maka ịdị mma nke ịdị mma ya.
O doro m anya na mu onwem g willnwe kwa ihe m riọrọ
M ga-emekwa ka ihe mgbu m dajụọ, ahụ́ erughị m ala,
hichaa anya mmiri m, obi m daa ogbenye alaghachila azụ.
Onye nkasi obi nke nsogbu
ajụla m nkasi obi ị na-arịọ Chineke.
Ka ọ dịrị!
Verona, Sant'Antonio gwọrọ obere nwa agbọghọ: na foto a nnukwu ụlọ ụka Basilica nke Padua bụ ebe ozu onye nsọ dị
Sant'Antonio di Padova: akụkọ ihe mere eme na ọrụ ebube ya na Fada Gianluigi Pasquale
'Jizọs, kuru m n'eluigwe!', Nwata nwanyị dị afọ 8 n'isi nke ịdị nsọ, akụkọ ya.
Ọ na-atụpụ onwe ya site na mita 30 mana a zọpụtara ya, Chineke nwere atụmatụ ndị ọzọ maka ya (VIDEO)
Na-arịa ọrịa Covid, ọ na-eteta na coma mgbe ha na-ewepụ ya na onye na-akwado ya
Donna nwere ọrịa kansa na-enweghị ọgwụgwọ, nrọ Jizọs ma gwọọ ya: "Ọrụ ebube"
Otu nwa agbọghọ si zọpụta nna ya na Purgatory: "Ugbu a, gbagoo n'eluigwe!"
Ị maara ọrụ ebube nke onye ọbịa na-agba agba na-agba ọbara? (VIDIO)
Ihe akpụrụ akpụ nke Nwanyị nwanyị anyị na -ebe akwa mmanụ a honeyụ na -akwa, enwere vidiyo nke nwa mmefu